» अप्रिल १ मा दैलेखको पेट्रोलियम खानी खन्न आउँदैछ चिनियाँ टोली
अप्रिल १ मा दैलेखको पेट्रोलियम खानी खन्न आउँदैछ चिनियाँ टोली
२०७७ फाल्गुन १, शनिबार १३:३०
काठमाडौं । दैलेखको पेट्रोलियम खानीमा ड्रिल गर्न चिनियाँ टोली अप्रिल १ तारिखका दिन नेपाल आउन लागेको छ । चिनियाँ टोलीले अप्रिल १ तारिखमा नेपाल यात्रा गर्न अनुमति माग्दै मिनिष्ट्री अफ नेचुरल रिसोर्सेसमा पत्र अनुरोध गरेको हो । ‘चिनियाँ टोलीले अप्रिल १ तारिखका दिन नेपाल जान अनुमति माग्दै आफ्नो मन्त्रालयमा पत्र लेखेको जानकारी आएको छ,’ पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख डा. सुधिर रजौरेले सिंहदरबारसँग भने ।
उनका अनुसार चीनको मिनिष्ट्री अफ नेचुरल रिसोर्सेसले अनुमति दिएपछि चिनियाँ प्राबिधिक टोली नेपाल आउनेछ । सोही टोलीले दैलेखको पेट्रोलियम भण्डार क्षेत्रमा ड्रिलिङ गर्नेछ । सोही ड्रिलिङले कति इन्धन छ ? र आर्थिक रुपले उत्खनन सम्भव छ की छैन भन्ने तथ्य उजागर गर्नेछ । दैलेखमा ड्रिलिङ गर्ने ठाउँको पनि पहिचान भैसकेको डा. रजौरेले जानकारी दिए । दशैंतिहारपछि जमिन सतहबाट चार किलोमिटर तलसम्म ड्रिलिङ गरिनेछ । त्यस्तो ड्रिलिङका लागि ५० टनको मेसिन चीनबाटै ल्याइनेछ । सो अवधीसम्ममा भने ड्रिलिङको पूर्व तयारीको काम गरिने पनि डा. रजौरेले जानकारी दिए । त्यसरी डिलिङ गरेका दुई वर्षभित्र इन्धनको मात्रा र आर्थिक सम्भाव्यताको प्रतिवेदन तयार हुनेछ । सो प्रतिवेदनका आधारमा उत्खनन गर्ने वा नगर्ने भन्ने एकिन हुनेछ ।
के के भयो अहिलेसम्म ?
त्यस अघि पनि चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सन २०१६ को अप्रिल ३० मा नेपाल आएर सुर्खेत दैलेख, बुटवल पाल्पा र चतरा बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीको संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो । २०७४ साउन ३१ गते चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिन भ्रमणका क्रममा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण गर्ने उल्लेख थियो ।